Muxuu ka yiri guddoomiyaha gobolka Shabeellaha hoose howlgalkii maanta Toora-Toorow lagu xorreeyay? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Muxuu ka yiri guddoomiyaha gobolka Shabeellaha hoose howlgalkii maanta Toora-Toorow lagu xorreeyay?
Muxuu ka yiri guddoomiyaha gobolka Shabeellaha hoose howlgalkii maanta Toora-Toorow lagu xorreeyay?
Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya oo ku sugan deegaanka Toora-Toorow
Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya oo ku sugan deegaanka Toora-Toorow ee G/Sh/Hoose
Toora-Toorow (Halqaran.com) – Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose, Ibraahim Aadan Cali (Najax) ayaa ka hadlay hawlgalkii maanta lagu xorreeyay Deegaanka Toora Toorow ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Ciidanka Kumaandooska Danab oo ka tirsan Xoogga Dalka oo ka dhaqaaqay Garoonka Balli-doogle ee duleedka Degmada Wanlaweyn ayaa bilaa dagaal kula wareegay Deegaanka Toora Toorow, ka dib markii ay isaga baxeen maleeshiyada Al-Shabaab.
Guddoomiyaha Gobolka Shabellaha Hoose ayaa marka hore sheegay in hawlgalkan uu qayb ka yahay hawlgalada muddooyinkii ugu dambeysay ee ka socday Gobolka Shabellaha Hoose.
Mar uu la hadlayay guddoomiyaha warbaahinta dowladda ayuu sheegay in Ciidanka Danab ay xilligan hawlgal amni xaqiijin ah ka wadaan Deegaanka Toora Toorow, isagoo intaa ku daray in dadka deegaanka ay ku farxeen imaanshaha ciidanka.
Guddoomiye Ibraahim Aadan Cali, ayaa tilmaamay in Toora Toorow ay ka mid tahay meelaha ay Shabaabka lacagaha sharci-darrada ah uga qaadaan shacabka.
Ilaa iyo hadda ma cadda in Ciidanka Dowladda Soomaaliya ay ku sii nagaan doonaan Deegaanka Toora Toorow iyo in kale, xilli ay horey uga soo baxeen muddo dhawr sano laga jooggo, markii ay kala wareegeen Al Shabaab.
Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose
Ibraahim Aadan Cali Najax
xoreynta deegaanka Toora Toorow